Isingeniso: Hlela, Uthengise futhi Ugcine Ngokuthengisa Komphakathi | Martech Zone
Isingeniso: Hlela, Thengisa futhi ugcine ngokuThengisa Komphakathi
NgoLwesibili, ngoFebhuwari 25, i-2014 NgoLwesibili, ngoFebhuwari 25, i-2014 Douglas Karr
Ukungenelela inikeza ukubukwa kwebhizinisi kobudlelwano namakhasimende namathemba okwenza izinqumo nezenzo eziqhutshwa idatha ukuthuthukisa inqubo yokuthengisa. I-Introhive ixhuma nge-imeyili, ama-akhawunti wezenhlalo, kanye nedatha yeselula ukuqoqa, ukuthola amaphuzu nokuhlinzeka ngemininingwane esebenzayo yokwengeza ukuthengiswa kwamathemba namakhasimende.
Introhive inikeza ipulatifomu edingekayo ukuze
Plan - Khomba, nika futhi uhlole ukuxhumeka kwakho kokuthengisa kwenkampani, umkhakha nendima.
Thengisa - ukwethula ukuthengiswa kwabathengisi ngobudlelwano bamanje kuma-akhawunti abo abhekiwe. Hlanganisa namapulatifomu wokumaketha okuzenzakalelayo ukuthola amaphuzu nokubeka phambili.
Gcina - Khomba ama-akhawunti asengozini ngokuya ngemibiko ekhombisa amandla obudlelwano ngokuhamba kwesikhathi kunoma yiliphi ikhasimende.
Yenza - Hlanganisa futhi uhlele ukushaya kwakho ukuze wenze ngokwezifiso izikolo zobudlelwano.
Salesforce iletha yonke imininingwane ecebile ye-Introhive nezikolo kuma-akhawunti we-Salesforce, oxhumana nabo kanye nemikhombandlela.
I-Introhive uhlelo lokusebenza lwe-SaaS olutholakala kunoma yisiphi isiphequluli sewebhu futhi kunezinhlelo zokusebenza ezingokwezifiso ze-iOS, i-Android, ne-Blackberry.
Tags: indawoisingenisoukuhola amagoliukuzenzekelayo kokuzenzekelayoushwelesalesforceukuthengisa komphakathi
Ngokuthuthukile: Thola, Vimba kanye ne-Deter Click Fraud
Umhlahlandlela Wokumaketha we-B2B wemiphumela yeDrayivu Yokuthengisa